तीन दिनको विवादपछि राप्रपा महाधिवेशनमा ४ हजार ४७१ मतदाताको टुंगो लाग्यो — Sanchar Kendra
काठमाडाै । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने मतदाताको टुंगो लागेको छ। बिहीबार राति निर्वाचन समितिले महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने मतदाताको सूची सार्वजनिक गरेको हो।
निर्वाचन समितिका सह-संयोजक तोरणबहादुर गुरुङका अनुसार लामो छलफलपछि राप्रपाका मतदाता अन्तिम टुगो लगाएर सूची सार्वजनिक गरिएको हो।
उनका अनुसार राप्रपामा चार हजार चार सय ७१ जनाको मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएको छ। मतदानस्थल राष्ट्रिय सभागृहमा सूची सार्वजनिक गरिएको छ।
यो सूचीमा: निर्वाचन समितिले दाबी विरोधका लागि शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्म समय छुट्याएको छ। दाबी विरोध सकिएपछि मतदाता नामावलीको अन्तिम प्रकाशन गरिने छ।
११ बजेभित्र दाबी विरोध सकेर अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने गुरुङले बताए। त्यसपछि साढे ११ बजेबाट उम्मेदवारको दरखास्त आह्वान गरिने उनले बताए। यो क्रम साढे १ बजेसम्म जारी रहने छ।
त्यसपछि उम्मेदवारीमाथि दाबी विरोध र उम्मेदवारी फिर्ताका लागि समय दिइएको छ। अपराह्न ५ बजेसम्म दाबी विरोध र फिर्ताको समय तय गरिएको छ।
५ बजे सबै उम्मेदवारको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरिने छ। उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशनसँगै शुक्रबारका लागि सबै कार्यक्रम सकिनेछन्। त्यसपछि शनिबार बिहानबाट मतदानको कार्यक्रम राखिएको गुरुङले बताए।
राप्रपामा हालसम्म अध्यक्षका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन प्रतिस्पर्धामा छन्। लिङ्देन समूहले उपाध्यक्ष र महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको छ। तर, थापा समूहले भने अहिलेसम्म उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको छैन।
राप्रपामा चार उपाध्यक्ष (एक महिलासहित), तीन महामन्त्री (एक महिलासहित)मा निर्वाचन हुने छ। एक सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये एक सय ४९ जनाका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने बाँकी निर्वाचित अध्यक्षबाट मनोनित हुन्छन्।
सहमहामन्त्री ७ जना, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता पनि निर्वाचित अध्यक्षबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ।
भ्रष्ट र कमिसनखोरलाई जनकारबाही गर्ने नेकपा कैलालीको घोषणा
७ सिट गुमाए पनि एमाले नै पहिलो दल, कसरी ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
मधेसबाट राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्रकी अर्याल निर्वाचित, देशभर अन्य को-को भए बिजयी ?
कुन प्रदेशमाथि कसको कब्जा, यस्तो छ अहिलेसम्मको ताजा मत परिणाम
गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित
एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारको मत बराबर आएपछि यसरी गरियो निर्णय, को भए बिजयी ?